Orinasa fananganana hozatra HIFEM - Mpanamboatra fananganana hozatra any Sina HIFEM, mpamatsy
portable Body sculpture hozatra ems tesla sary sokitra
Fitsipika miasa Ity fitaovana ampiasaina amin'ny hozatra hatsaran-tarehy ity dia mampiasa teknolojia tsy manafika ny onja elektromagnetika mifantoka amin'ny alalàn'ny hery avo lenta mba hamoahana angovo mihetsiketsika avo lenta amin'ny alàlan'ny fitsaboana lehibe roa hamakivaky ny hozatra hatramin'ny halalin'ny 8cm, ary hitaona ny fanitarana sy ny fihenan'ny hozatra ho hahatratra fiofanana mahery vaika avo lenta, hampitombo ny fitomboan'ny myofibril ary hamokatra rojom-pako sy kofehy hozatra vaovao, hampiofanana sy hampitombo ny hakitroky ny hozatra ary ...
Inona ny EMS SCULPT? Desgin EMS scuplt vaovao farany izay mampihena ny teknolojia elektrômanetika (HIPEM) avo lenta ho an'ny fampihenan-tena, fanamafisana ary fandoroana tavy. Fitaovana matihanina ho an'ny salona hatsaran-tarehy sy dokotera izay te-hanolotra ny mpanjifany ny fitsaboana amin'ny laoniny tsy maharitra sy mahomby EMScuplt Body slamping manangana hozatra ary mandoro tavy miaraka amin'izay. Ny pulsa elektromagnetika dia miteraka fihenan'ny hozatra supramaximal izay manery ny hozatry ny hozatra hifanaraka, leadi ...
Ahoana ny fomba fiasa? Ny fampihenana an-tsitrapo dia mety hampitombo ny fangatahana angovo avy amin'ny sela matavy. Ny epinephrine navoaka dia manondro ireo sela matavy hanombohana lipolysis. Ny fifandonana mahery vaika indrindra dia manatsara ny famoahana ny valin'ny adrenaline Trigger mitarika mankany amin'ny sela lipolysis Fat-maximum indrindra. Ny fihoaran'ny asidra matavy maimaim-poana (FFA) dia miteraka tsy fetezan'ny sela sy fampidirana apoptosis - fahafatesan'ny sela voapetraka. Ny sela maty dia mirodana ary voafafa voajanahary. Fifanarahana mahery vaika supramaximalstimul ...
CE nankatoavina 4 lohan-doha miasa hozatra manangana fanesorana menaka Emslim
Fitaovam-pitsaboana isan-karazany Tantano faritra fampiasana apetraka amin'ny tanana, feny, zanak'omby Kibo, vodin-tratra, feny Fomba samihafa: Mazava ho azy fa fitsaboana 1. 2-3 isan-kerinandro, in-4-6 ho toy ny fitsaboana. 2. 4-6 Ny fampianarana fitsaboana tsara indrindra. Miankina amin'ny toe-batana an'ny mpanjifa, ny mpanjifa be loatra na tsy manao fanatanjahan-tena maharitra dia afaka mampitombo ny fitsaboana. 3. Ny vokatra tsara indrindra dia 2-4 herinandro aorian'ny fitsaboana. Ny olona sasany dia hahatsapa hozatra tery vao vita ny ...
Hi-Emt 4 lohan'ny masinina hatsaran-tarehy hozatra ho an'ny vatana
Tombontsoa efatra 4 lohany treament ho an'ny fanatanjahan-tena manontolo 49500time mametaka hozatra ao anatin'ny 30minutes 100HZ haavo avo 7 Telsa hery mahery Magshape Machine fampidirana Famaritana onja elektromagnetika (angovo) 0-7tesla Herinaratra famoahana 4300W Frequency F1: 1-10Hz F2: 1-100Hz Pulse width 300us TOSIKARATRA AC220V ± 10% 50Hz AC110V ± 10% 60Hz Fomba fanatanjahan-tena Mod maodely Malemy paika Fomba matihanina efijery 12 santimetatra 16 ： 9 Fitsaboana fitsaboana 4 fikirakirana milina ...
4 mitantana masinina fananganana hozatra magshape
Magshape dia famolavolana vatana sy fitaovana fananganana musule. Izy io dia mety amin'ny fampihenana, famolavolana, fahazoana hozatra, famonoana tavy, fanaovana tsipika akanjo ary fampiakarana valahana，tsara ho an'ny fahasalamana.
Ny fampiharana ny masinina ems Magshape dia afaka manamboatra ny rojo hanamafisana ny hozatra fototra, ao anatin'izany ny hozatry ny kibo hozatra lehibe (hozatry ny kibo amin'ny tendrony, hozatra mivoitra ivelany, hozatra mivalona anatiny, hozatra amin'ny kibo transverse) ary ny gluteus maximus ao amin'ny hozatra kely fototra . Ny hozatra fototra dia afaka miaro ny hazondamosina, mitazona ny fitoniana ny vatan-kazo, mitazona ny fihetsika marina, manatsara ny fahaizan'ny hetsika ary mampihena ny vintan'ny ratra, manome fanohanana ara-drafitra ...
Fampiasana HI-EMT: isan-karazany ny fahita matetika izay tsy mamela ny hozatra hiala sasatra eo anelanelan'ny fanentanana,
fanerena ny hozatra hijanona ho mpifaninana mandritra ny segondra maromaro. Ny fiforonan'ny hozatra dia mitranga rehefa miverimberina matetika ny hozatra
tratran'ireny toe-javatra mavesatra ireny.
Ny fandinihana dia naneho fa ny hatevin'ny hozatry ny kibo dia mitombo amin'ny salanisa 15-16% iray hatramin'ny roa volana aorian'ny fitsaboana amin'ny HI-EMT.
Masinina manamboatra maody mazoto mandoro
Mifantoka amin'ny famolavolana tena sy ny fananganana tazomoka
Magshape dia famolavolana vatana sy fitaovana fananganana musule. Izy io dia mety amin'ny fampihenana, famolavolana, fahazoana hozatra, famoahana tavy, fanaovana tsipika akanjo ary fiakarana valahana, tsara ho an'ny fahasalamana.
Izy io dia mandaitra indrindra ho an'ny vody sy ny kibo. Mampiasa teknolojia an-tsaha elektromagnetika (HIFEM) mifantoka amin'ny haavo avo lenta izy io mba hiteraka fipoahana vetivety amin'ny fihenan'ny hozatra mahery, vokatr'izany
nitombo ny hakitroky ny hozatra, nihena ny habetsaky ny feo, nanatsara ny mazava ary nanatsara ny feo.
Io no fomba tokana hanampiana ny vehivavy sy ny lehilahy hanangana hozatra sy handoro tavy, ary io no fomba voalohany fampiakarana valahana voalohany.
Mifantoka amin'ny famolavolana vatana, fananganana MUSCLE ary lanja lanja
Izy io dia mandaitra indrindra ho an'ny vody sy ny kibo. Mampiasa teknolojia an-tsaha elektromagnetika (HIFEM) mahery vaika izy mba hiteraka fipoahana vetivety amin'ny fihenan'ny hozatra mahery, ka mitombo ny hakitroky ny hozatra, mampihena ny isan'ny volanao, manatsara ny fahazavana ary manatsara ny tonony.
Fanesorana volo Shr Opt Ipl, Masinina mpanentana hozatra Ems, fanesorana ny holatra, Laser estetika Co2, Co2 Laser Laser miato, Shr Ipl Opt,